Vehivavy 22 taona aho, miaraka amin’ny lehilahy iray efa ho 2 taona izao.
Efa fantatry ny fianakaviana roa tonta ny fiarahanay, tena tiako izy no sady tia ahy. Ny olako dia taranak’olona samy fohy izahay sady somary mainty, ka te hanarina an’ilay taranako mba ho tsaratsara kokoa aho. Inona no azoko atao ?
8 taona no niarahana izaho sy ny sipako. 2 taona niarahana izahay no lasa nianatra tany ivelany izy.
Nety aloha ny fiarahana nandritra ny 6 volana voalohany. Taorin'izay anefa dia niaraka tamin’olona izy, satria tsy ampy, hoy izy, ny vola alefan’ny ray aman-dreniny, ka mila io vehivavy io izy hanampy azy.
Misy lehilahy izay, tiako nefa efa miaraka amin’olona.
Izaho koa efa « fiancée », fa vao mahita azy aho dia midobodoboka be ny foko sady tsy mahajery azy mihitsy aho. Niresaka asa tao anaty Facebook izahay, dia te hiteny aminy aho hoe : tiako izy, nefa menatra aho satria zandriko izy sady « bôgôsy » be. Mba ampio aho fa mijaly.
17 taona aho ary 19 taona ny sipako. Volana maromaro niarahana izahay dia nisaraka, satria latsa-pitiavana tamin’ny namany tena akaiky azy aho.
Notantarain’io namany io taminy ilay fitiavako, ka izay no nampisaraka anay. Mbola tiako anefa io sipako io ary amin’ny fihetsika asehony ahy koa dia ahitako fa mbola tia ahy izy. Mba torohy hevitra aho fa mijaly.
19 taona aho, miaraka amin’ny lehilahy 29 taona izay efa nisara-bady. Tsy tian’ny fianakaviako mihitsy izy, nefa izaho tia azy. Ilay vadiny taloha koa mandrahona ahy foana. Inona no tokony ataoko ?
Rehefa entanim-pitiavana ny olona dia ny fo no miasa kokoa noho ny saina. Noho izany, henoy ihany ireo manodidina anao sao misy zavatra tsikaritr’izy ireo, na mampanahy azy ireo ary mitombina, ka izay no mahatonga azy ireo hanjary hankahala ilay olon-tianao.
Inona marina kay ilay atao hoe mitia amin’ny saina ? Tsy lasa matérialiste indray ve raha manao an’izany ?
Ny fitiavana tena fitiavana aloha dia avy any amin’ny fo, izany hoe : tonga ho azy, tsy misy kajikajy, tsy voatohitra. Izay izy no atao hoe : fitiavana madio, tsy misy ambadika mihitsy.
Tsotra ny antony : ahoana moa no ahafahana mamantatra olona iray sy mifankahazatra aminy, ary mitia azy vokatr’izay fahafantarana azy sy izay fifankahazarana aminy izay, raha toa ka tsy efa nifanerasera taminy aloha ? Ahoana no hahafahana manambady olona tsy fantatra amin’ny antsipirihany araka izay azo atao ? Ny fiarahana, na ny fifamofoana koa angaha no mahalaza azy, no hany fomba hahafantarana kokoa ny olona iray ka hahafahana mitia azy amin’ny tena maha-izy azy ary hahafahana manapa-kevitra avy eo, na mendrika ny ho vadinao izy, na tsia
Vehivavy 17 taona aho. Niaraka tamin’ny lehilahy anankiray efa nandritra ny 5 volana aho vao nahafantatra fa efa manambady izy. Nolazainy fan oho ny fitiavany ahy no antony nanafenany ny marina. Nanapa-kevitra ny hisaraka taminy aho, saingy amin’izao izy dia miangavy ny hifamerenanay indray. Inona no tokony ataoko ?
Matoa ianao nisaraka taminy, rehefa nahalala fa manambady izy, dia satria fantatrao fa tsy mety ny miaraka amin’olona efa manambady. Raha kristianina ianao dia fahotana eo anatrehan’Andriamanitra izany. Tsy vitan’izany fa misy lalàna velona manasazy ny mpanitsakitsa-bady sy ny mpangala-badin’olona eto Madagasikara. Efa nanapa-kevitra ny hisaraka taminy ianao, dia aza miverina amin’izay fanapahan-kevitra tsara efa noraisinao izay intsony. Raha mbola misisika aminao izy dia valio hentitra tsara, fa zava-dratsy ny mampirafy sy ny mangala-badin’olona. Tokony ho menatra izy, raha ianao azo lazaina ho mbola ankizy aza dia mahatsapa izany
Vehivavy aho. Izay lehilahy tiako rehetra dia, na tsy tia ahy, na efa miaraka amin’olona. Amin’izao indray, misy lehilahy tiako, izay indraindray mijery ahy, indraindray tsy miraharaha ahy. Tiako ho fantatra hoe : mba tia ahy ihany ve izy ?
Tsy azonao vinaniana amin’ny topimasony fotsiny ny mety ho fihetseham-pony. Mila miresaka aminy ianao, raha tena tianao hazava aminao ny ao am-pony. Mety sadaikatra angamba ianao raha avy hatrany dia hiresaka aminy, ka andramo aloha ny mitsiky aminy, rehefa ilay tsikaritrao fa mijery anao iny izy. Tokony hanintona azy ny tsikinao ary hamaly izany amin’ny tsiky koa izy, raha mahaliana azy ianao. Mety handrisika azy hanatona anao koa aza izany, saingy raha saro-kenatra izy dia ampio kely indray ny fanatonana azy. Andramo arahabaina indray izy, rehefa mifanena ianareo, sady itsikio hatrany. Raha mbola tsy manao dingana manatona anao izy, aorian’izany dingana efa nataonao izany, dia mety tsy liana manokana aminao izany.